Timedatectl na Hwclock: Iwu iji tọọ ụbọchị na oge na Linux | Site na Linux
Timedatectl na Oge elekere Ha bụ 2 bara uru nyere n'iwu imeghari oge (ụbọchị na oge), anyị GNU / Linux Sistemụ arụmọrụ.
Ọtụtụ oge mgbe ị na wụnye na iji a GNU / Linux Sistemụ nrụọrụ, ụfọdụ nwere ike ịmara na mgbe ha na-amalite oge nke ọ bụla, nnọkọ onye ọrụ na gburugburu ebe eserese ma ọ bụ site na njedebe, the oge (ụbọchị na oge) na Usoro njikwa nke kọmputa mgbanwe (adịghị mma). N'ọnọdụ ndị ọzọ, ọ na-agbanwekarị mgbe ị nwere nhazi nke okpukpu abụọ (abata abụọ) na iji ihe Sistem arụmọrụ arụnyere.
N'okwu mbụ a kọwara, ya bụ, iji naanị GNU / Linux, ọtụtụ oge enwere nsogbu ahụ nwa oge, ya bụ, edozighi ya kpamkpam, dozie ngwa nhazi elekere nke ọma ma ọ bụ site na iji ọnụ iwu "ụbọchị".
N'okwu nke abụọ, ya bụ, iji 2 ma ọ bụ karịa Sistemụ arụmọrụ dị iche iche, na-emekarị GNU / Linux na Windows, a na-edozi nsogbu ahụ nwa oge site na iji aka ya edozi oge site na nke mbụ na oge (ụbọchị na oge) nke abụọ, na ụfọdụ oge na mgbe BIOS nke kọmputa.
2 Timedatectl na Hwclock Iwu
2.2 Oge elekere
El nsogbu nsogbu oge ụgha, n'ụzọ anyị GNU / Linux Sistemụ arụmọrụ ha na-arụ ọrụ ụbọchị na oge. Nke ahụ bụ, ọ bụghị otu ka esi eme ya Sistemụ arụmọrụ dị iche iche dị ka Windows, obu ezie na ee dika ndi ozo, dika, MacOS.
En GNU / Linux ma ọ bụ MacOS, a na-eji ụkpụrụ ahụ eme ihe UTC (Oge Nhazi Oge Universal) ịtọọ oge nke otu, ebe na Windows abụghị. Windows na-eburu na kọmputa ahụ na-echekwa oge ziri ezi na emelitere na Elekere ngwaike nke motherboard, nke ahụ bụ, na BIOS. Ebe ọ bụ na Elekere na / ma ọ bụ BIOS ị ga-ejirịrị oge gafere, ọbụlagodi mgbe kọmputa kwụsịrị.
Ya mere, na ndabara, Windows na-eburu na oge ziri ezi na-echekwa na Obodo oge (Elekere / BIOS) site na kọmputa, mgbe GNU / Linux, dị ka anyị kwurula, ọ na-eburu na oge echekwara na Oge UTC, nke na-eme ka oge cyclical akara akara site na iji ọzọ 2. N'ihi ya, ezi uche dị na ya bụ ịhazi ihe n'ụzọ ziri ezi Obodo oge (Elekere / BIOS) site na kọmputa, ma hazie Sistemụ arụmọrụ ọ bụla iji kwurịta ya iji mekọrịta oge iji gosipụta onye ọrụ.
Timedatectl na Hwclock Iwu
Enwere iwu iji dozie nsogbu a, ya bụ, ịhazi nke ahụ GNU / Linux na-ekwukọrịta na ngwaike (Elekere / BIOS) site na kọmputa gị ma na-emekọrịta ya, ka gosi onye ọrụ n’otu oge, dika i si eme Windows.
Tupu e gbuo gị, nhazi ziri ezi nke oge (ụbọchị na oge) na BIOSMgbe ịmechara iwu ahụ, ọ ka mma ịmalitegharị ma gosipụta na ọ na-agbanwe agbanwe, nke mbụ n'ime GNU / Linux Sistemụ nrụọrụ ma na BIOS.
Iwu ndị a bụ:
Iwu nke oge a pụrụ iche, maka ndị ahụ GNU / Linux Distros na ha rụnyere Systemd dị ka Usoro mmalite 1 (PID 1), ọmụmaatụ, DEBIAN GNU / Linux. Ebe ọ bụ, ọ bụ ọrụ enyere site na sistemụ na njikwa ọrụ.
Iji mezuo iwu ahụ, kwe GNU / Linux na-ekwukọrịta na ngwaike (Elekere / BIOS) site na kọmputa ma mekọrịta ya, iwu a ga - eme:
Maka ozi ọzọ banyere iwu a, nhọrọ «set-local-rtc [BOOL]»Ma ndi ozo, gbasara DEBIAN GNU / Linux, ị nwere ike ịnweta ya Akwụkwọ ntuziaka na ntanetị (njikwa) nke nchịkọta na iwu nke otu, na ihe ndị a njikọ. Ma ọ bụ gụọ peeji nke nwoke mpaghara gị site na ịgba ọsọ «man timedatectl".
Iwu a na iwu ugbu a pụrụ iche maka ụdị niile GNU / Linux Distros, ebe ọ bụ na ọ dabereghị Sistemụ, ma ọ bụ site na usoro ọ bụla na onye nchịkwa ọrụ.
Iji mezuo iwu ahụ, kwe ka Usoro njikwa GNU / Linux na-ekwukọrịta na ngwaike (Elekere / BIOS) nke kọmputa ma mekọrịta ya, ya bụ, hazie oge nke otu ihe na BIOS, a ga-egbu iwu ndị a:
Cheta na: Maka okwu ọzọ, ya bụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmekọrịta na ntụgharị (hazie oge BIOS dị ugbu a na sistemụ arụmọrụ) ị nwere ike iji iwu «hwclock -s»Ma ọ bụ iwu ahụ «hwclock --hctosys«.
Maka ozi ọzọ banyere iwu a, nhọrọ «-w»Na ndị ọzọ banyere DEBIAN GNU / Linux, ị nwere ike ịnweta ya Akwụkwọ ntuziaka na ntanetị (njikwa) nke nchịkọta na iwu nke otu, na ihe ndị a njikọ. Ma ọ bụ gụọ peeji nke nwoke mpaghara gị site na ịgba ọsọ «man hwclock".
Site ugbu a gaa n'ihu, mgbe ịkwụsị iji UTC ụkpụrụ maka ụbọchị na oge, nke ahụ bụ, mgbe ị na-eji oge (ụbọchị na oge) na BIOS na GNU / Linux ma ọ bụ ọtụtụ Sistemụ arụmọrụ, a ga-ezere nsogbu na nhazi oge ngwaike ma usoro abụọ ahụ ga-enwe otu oge, na-enweghị lags.
Ọzọ ọzọ usoro maka ịtọọ ụbọchị na oge nke GNU / Linux Sistemụ nrụọrụ na mmekọrịta bụ na BIOS na kọmputa, iji iwu «date»Na«hwclock»Ndi a:
Mezuo iwu iwu site na a mgbọrọgwụ nnọkọ ịtọọ ụbọchị 08: 00 na March 07, 2020.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Timedatectl y Hwclock», 2 bara uru «Comandos de GNU/Linux» eji iji ubochi na oge nke anyi «Distros GNU/Linux», karịsịa iji dozie nsogbu nke oge mismatches na «ordenadores con doble booteo (inicio)», nwee nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Timedatectl na Hwclock: Iwu iji tọọ ụbọchị na oge na Linux
Nnọọ! I meela nke ukwuu, ozi ahụ enyerela m aka, m na-eji cinnamon manjaro ma enweghị m ụzọ m ga-esi hazie ya, ma ọ bụ mekọrịta mmekọrịta na Internetntanetị, emeghị m mgbanwe ọ bụla ... mana ekele gị ọ dịrịlarị 😀
Zaghachi octavio dos santos
Ekele Octavio! Obi dị m ụtọ na isiokwu enyerela gị aka nke ọma. Daalụ maka okwu gị na onyinye gị.
n'ọnọdụ m, m ga -agbanwe / etc / adjtime dị ka 'LOCAL' kama ịbụ UTC 'n'ihi na linux gbanwere oge bios ka ọ bụrụ UTC na windo wee were ya dị njọ; na
elekere - mkpu
Enwere m ike ịchọpụta na ọ naghị agbanwe ya ọzọ mgbe m na -eme mgbanwe ahụ
Daalụ, Fabian. Daalụ maka nkọwa na ntinye gị.
A ahụhụ kwere aha phishing ngalaba na Unicode odide